"A pasitera nanao hoe: Efa lasa lavitra toy izany, indray andro, evanjelista hitsangana ka manao hoe: Efa nandray ny fanambarana avy amin'ny Tompo, tonga ny fotoana hanombohana nanompo Maria. Izany dia mandeha ny fotoana izay."
"Io no iray amin'ny lehibe indrindra fahoriany 'i Jesoa Kristy mpanao nanomboka Kristy. Miangatra filazantsara ity dia manapoizina vola - na dia ao Shina, Afrika sy manerana izao tontolo izao. Izany dia Amerikana namorona filazantsara ka namelatra ny manan-karena Amerikana evanjelista sy ny pasitera. Rich! "
Handraisako azy indray isika mba hahatakatra ny mafy ianao, raha mbola tsy nanao izany. Feno fankasitrahana aho fa Andriamanitra namonjy ahy amin'ny hevitra diso ny fanambarana ary miaiky izany ny ota rehefa nahazo teny toy ny fampianaran-diso.
Ianao malahelo noho izay dia mijery toy ny any Soeda ankehitriny eo anivon'ny vahoakan'Andriamanitra? Aiza ny resaka mikasika ny fampakarana ny Ampakarina? Indraindray dia toa ny ankamaroan'ny Kristianina no mifantoka kokoa amin'ny Antikristy ambony toy izay ho avy indray i Jesoa!
Vonona ve ianao ny ho avy i Jesosy? Ny lahateny ao amin'ny Hazofijaliana, rehefa nandre ny farany indrindra, 1886?
Ary mahazo kely David Wilkerson famakiana momba ny zavatra nosoratany momba ny finoana hetsika.
The baraka Fivoriambe
Tany am-boalohany anglisy anaram-boninahitra FITEHIRIZAM-BOKIN'NY Vavolombelon'i fahafaham-baraka ny fotoam-pivavahana
nataon'i David Wilkerson
Zefania 3: 18- Ireo izay manina ny fotoam-pivavahana no hanangona azy ireo, izay avy aminao, izay ny vesatry ny fahafaham-baraka. (1917)
Izany no manana lafiny roa faminanian'i Zefania. Tsy maintsy atao ny zanany tamin'ny Isiraely, fa ara-panahy koa i Ziona (dia ny Fiangonan'i Jesoa Kristy amin'ny andro farany). Voalohany indrindra, dia miteny ho any amin'ny Jiosy - fa Andriamanitra dia hitondra miaraka ny niparitaka - fa izy ihany no hitondra indray ireo izay nanana fo torotoro ho an'ny Isiraely toe-pahasalamana nampahonenan'ny - izy hahatsiaro rehetra izay nitondra ny fanalam-baraka - rehetra ny zava-mahatahotra izay nandeha an'Andriamanitra trano. Ho an'ireo izay nitondra ny enta-mavesatra, dia hoy izy; "No hanangonako anao." Dia nomeny azy ireo fampanantenana lehibe
Io faminaniana io koa i Stefana 'ny fiangonan' i Jesoa Kristy amin'ny andro farany. Ao amin'ny Testamenta Taloha, ny Zanak 'Isiraely dia nantsoina ho amin'ny andro firavoravoana hafitoana. Ary amin'ny andro fahavalo - antsoina hoe fivoriana masina. Tamin'izay dia nivory - mametraka kely zavatra hafa rehetra, ary mifantoka amin'ny dia nitsaoka ary niandrandra ny any an-danitra. Soratra Masina manao hoe: "Ary amin'ny andro fahavalo dia hisy fara-fivoriana." Famoriam-bola amin'ity andro firavoravoana ity dia maneho ny Testamenta Taloha, Andriamanitra nanokana ny Fiangonana dia mila hitsena ny Tompo.
Ity no Fiangonan'i Jesoa Kristy amin'ny andro farany. Araka ny Zefania, ny tranon 'Andriamanitra amin'ny andro farany mba ho afa-baraka. Ilay teny hebreo eto dia midika hoe "henatra sy ny fahafaham-baraka". Dia ho henatra sy fahafaham-baraka ny tranon'Andriamanitra. Dia tsy miresaka momba ny mpivadi-pinoana, liberaly fiangonana ankehitriny - ny Tompo dia milaza fa amin'ny andron'ny fitsarana, Izy no miatrika ny fiangonana. Afaka mivavaka ho azy ireo, nefa tsy tokony handany ny ranomaso teo amboniny izay tsy ny tena Fivoriambe.
Andriamanitra mitady ny olona izay te-be ory sy hitomany noho ny fanalam-baraka miforona Fiangonan'i Jesoa Kristy amin'izao andro izao. Aho miresaka momba ny fiangonana izay teraka tamin'ny Pentekosta. Aho miresaka momba ny fiangonana izay teraka tamin'i Paoly sy ny fampianaran'ny Apostoly. Ny fiangonana izay teraka tao amin'ny fahamarinana 'i Jesoa Kristy mba hitondra. Nateraka indray ny fiangonana dia iharam-panafihana. Fivoriambe no nanetry tena.
Voalaza naminany fa amin'izao andro ny fanalam-baraka, henatra sy ambentinteny, Andriamanitra no hatsangan'i masina izay sisa ihany no be ory sy hitomany noho izany ny fandotoana - Andriamanitra dia manana ny sisa izay tsy miara-mipetraka hiraviravy tanana ny rehetra raha izany Manafika Fivoriambe. Hoy Andriamanitra: "Izaho manana olona dia tsy ho afa-po ny hiaina fiainana tsara, ary tsy miraharaha ny quacks sy ny vola very saina mpaminany sandoka hiditra ao an-tranon'Andriamanitra sy ny handringana ny zava-drehetra."
Andriamanitra dia hanangona ny olona izay malahelo noho izany - raha tena tia an'i Jehovah sy tia ny fiangonana, dia tsy afaka mijery ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao (ary Izaho no milaza izany fahoriany amin'ny anarany). Raha rehefa avy nandre izay tsy maintsy lazaiko momba ireo fahoriany, dia afaka mandeha an-trano avy any am-piangonana ka hanao hoe: "Izaho mifikira amin'ny voasoratra ao amin'ny Matio 18, ny vavahadin 'ny helo dia tsy hahajanona niakatra ho any amin'ny Fivoriambe, dia tsy manahy momba ahy, Andriamanitra manana ny zavatra rehetra eo ambany fanaraha-maso.
Tsy ampy. Andriamanitra mampiasa olona. Andriamanitra mampiasa olona hanao ny asany. Tsy mandefa anjely. Hitomany noho izany ny anjely, fa Andriamanitra no tsy mampiasa anjely mba hanatanterahana ny fikasany. Mampiasa lehilahy sy ny vehivavy amin'ny fo torotoro sy ny entana -. Ny fitsarana dia eo am-baravarana, i Jesosy. Day 'ny Tompo efa akaiky.
Mifohaza anti-panahy. Mifohaza mpitandrina. Mifohaza mpiandry ondry.
Hijery ny fiangonana. Get ny Rye. Wear izany. Nahoana isika no mandray amin'ny Faminaniana ny amin'ny fotoam-pivavahana fahafaham-baraka? Joel nanao hoe, "satria ratsy efa voa nambolena.
Ny filazantsara nitory fa mahazo ny zava-drehetra eo imason'ny mba malazo. Ny zava-drehetra dia avy amin'Andriamanitra ary maitso sy malazo madio. Ny voa no ruttet- olona mosary hihaino ny teny madio, nefa tsy misy tsahan'i. Ny omby ka havela sy noana. An'i Neily avy. Misy afo mandevona hafa ny mpitandrina. Ezekiela fa mpiandry ondry no nanosihosy teo ny saha tsara ka hihinana ny tsara indrindra ho anao. Inona no tena mahamenatra zavatra izany ao amin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy amin'izao fotoana izao?
Izany no iray amin'ireo lehibe indrindra fahoriany 'i Jesoa Kristy mpanao nanomboka Kristy. Izany Naolan'i ny filazantsaran 'fanapoizinana vola - na dia ao Shina, Afrika sy manerana izao tontolo izao. Izany dia Amerikana namorona filazantsara ka namelatra ny manan-karena Amerikana evanjelista sy ny pasitera. Nanan-karena!
Ny mahatonga ahy Maharikoriko fa maro ny olona afaka mandre ny fatorana, ka jereo ny lahatsary izay tonga avy any amin'ny fanambinana ireo fihaonambe nefa tsy nitomany azy. Izany poizina dia niely manerana izao tontolo izao. Kiobà dia hiloa, ary dodona izy ireo mba ao amin'ny indray mandeha ny fahombiazana ny filazantsara ka lazao aminy hoe: "Efa ela mahantra ampy, tian'Andriamanitra Kiobàna rehetra tokony hanan-karena."
Tamin'ity herinandro ity dia nahazo lahatsary kasety izay ao amin'ny Kenneth Copeland ny fivoriana. Dia nihaino ny mpandahateny, ka lasa nahateny. Friends namaky ny Testamenta Vaovao, dia ho hitanao fa ny apostoly Paoly fa avy ireo izay nino izy ireo apostoly sandoka. Nampitandrina ary nanonona ny anarany. Lazaiko aminareo fa raha mihaino izay lazaiko aminareo, fa mba hisaona ianareo, dia jamba. Jamba ara-panahy ianao. Manana fo mafy. Ny fo mafy amin'ny fiadiana manodidina ka ny filazantsara madio dia tsy afaka miditra izany. Efa lasa tafahoatra ity tototry ny filazantsara fa tsy ao an-tsaina tsara. Tsy afaka hitory ny fahamarinana. Tsy afaka mampiseho azy ireo na inona na inona an-tsoratra izy ireo, satria manana fiadiana ny am-pony. Hard fo.
Ny sasany aminareo dia tsy handray izany. Raha efa niditra ny fanahinao Copeland na Hagin ny horonam-peo, dia tsy mba tahaka izay renareo. Ry namako, Izaho no mpiandry ondry, efa nantsoin 'Andriamanitra. Efa nomeko ity fiangonana ity fampanantenana. Raha mbola hijanona eo izany isika ambony lampihazo, izahay nahita amboadia amin'ny fitafian'ny ondry, izay tonga mba hangalatra ny ondry, dia tokony hitsangana sy niantsoantso. Tena miakatra ho any aminareo mba hanao zavatra momba izany. Dia nipetraka tamin'ity herinandro ity, ary nihaino ny mpandahateny nandritra ny fihaonambe sy tohina aho, ary naratra. Ny Tompo dia tonga ny ahy fahoriana. Izany no mahatonga ahy hitory io hafatra io. Mitomany azy.
Averiko teny ho an'ny teny izay efa nolazainy. Ny mpandahateny Saika tsy vita noho ny miteny ny vahoaka rehetra izay niara-niakatra ka asio vola teny an-paosy. Ny antony ireo no manao dia fampianarana vaovao izay efa tonga ka miteny hoe: "raha te-ho sambatra, ka mila mahita ny tena fitahiana na ny pasitora evanjelistra dia afaka mahita fa misy betsaka mahazo be dia be 'Ilay kely, na izay ananany aza dia halaina aminy. Raha hitanao hoe tena fahombiazana fitahiana mpitory sy hanome vola azy, ary dia ho voatahy. Ny sambatra kokoa izy, raha manome ho an'ireo izay tena voatahy - "fa toy ny piramida rafitra. Raha ireo olony dia tany amin'ny tontolo tsy ara-pivavahana izy ireo, dia hiafara any am-ponja. Piramida tetika. Izay no tampony, ary izay toa ho masina indrindra, sady niteny mafy indrindra. An-jatony ny olona niakatra mandra-paosy no nifanizina. Ho mpanota ny hoe: "izao no filazantsara maimaim-poana? Banknotes? "
Henoy izay efa nolazainy. Ny mpandahateny nitsangana ka nanao hoe: momba ny mpitondratena malahelo izay mandray fanampiana ara-tsosialy dia manome anao 5 dolara, dia tsy maintsy maka azy, Elia nandray ny mpitondratena sakafo farany. Ianao no voahosotra, no mendrika izany, samia maka azy io. "Toy izany koa mpandahateny nilaza hoe:" Miaina ao anatin'ny trano-tongotra 1000 toradroa. Hanao trano lehibe kokoa ankehitriny. Iray izay i Solomona Mpanjaka ho mirehareha. I nandoa fotsiny 15.000 dolara Amerikana ho an'ny alika. Hitanao ve ny asa lehibe eo amin'ny peratra ny rantsan-tanako, vao haingana aho tany Jamaika, ary mandray karama 32.000 dolara Amerikana ho azy. Tiako ho fantatrareo fa rehefa velona ny olona izay mihazakazaka lasa ny trano izy, ka jereo ny Rolls Royce-in ny lalana mivily, ka fantany fa misy Andriamanitra any an-danitra. "
Lazao amiko, dia ny filazantsara? Lazao amiko, aza mitomany noho izany?
Ny iray amin'ireo mpandahateny nitsangana ka nanao hoe: "Efa nanao fanekena tamin'ny Rahalahy Copeland fa nandritra ny taona ho avy, tsy misy amintsika hijaly andro iray. Tsy tokony hahatsapa ny fotoana ny fahakiviana. Dia tsy harary na mila zavatra. Tokony hahazo ireo fitahiana rehetra. Isika rehetra mandà ny fijaliana, ny fahoriana rehetra, olana ara-bola rehetra. " toa tsara izany raha eo an-tampony.
Izao inona no tena malahelo ahy. Izany no nitory. "Ny Fanahy Masina dia tsy azo harotsaka eo aminao mandra ao amin'ny vola mikoriana. Alohan'ny no mahomby dia afaka ny Fanahy Masina dia tsy manao na inona na inona. "
Eritrereto izany! Ahoana no fiantraikan'izany eo amin'ny anao? Inona no mahatonga azy io amin'ny fanahy rehefa mahita ny mahantra olona mipetraka amin'ny tanana ny vava, ary tampoka izy hoe: "mitady vola" sy ny olona mihazakazaka toy ny adala ary rehefa mihazakazaka, hoy izy ireo dia "mitaky ny harena isika."
Ary hitako ny olona toy ny bibilava nandady niala tamin'ny seza sy teo amin'ny tany. I mijery Evanjelistra hitsangana sady hisitrisitra toy ny bibilava sy ny olona hianjera eny rehetra eny. Ry namako, inona no mitranga?
Tena afa-baraka högtidsförsamligen! Ny Mpaminany dia niantso azy ireo hoe "tia vola alika, mpiambina ratsy fanahy". Ry namako, raha nanana ny fo 'Andriamanitra sy ny fahoriana ny Tompo no mitaraina amin'ny Isaia, jamba izy ireo mpiambina, fantatrareo, amboa moana, matory, tia torimaso, tia amboa ireny; ka tsy mahalala voky.
"Manana 1000 metatra toradroa fa Izaho kosa amidy, fa Izaho no hanao trano nataon'i Solomona mpanjaka ho velona afaka in-" Mba tsy mahazo ampy. Hoy izy hoe: "mpiandry tsy mahafantatra ireny, Ny olona rehetra mitady azy, na inona na inona mba hahazoana ny zavatra ilaina nihaona. Jeremia navelan'Andriamanitra tsy misy teny. Hoy izy hoe: "Ny olona toy ny ondry very. Ny mpiandry ondry no nitarika azy ireo ho very. "Ianareo manao hoe:" Pasitera, Tsy manan-jo hiteny mafy momba izany. "Raha ny hevitrao maranitra aho, dia Vakio ny Ezekiela 34: 1-10.
Ianao maka 50 tapitrisa avy amin'ny mpitondratena izy ka mahazo ny alika ho an'ny SEK 150 000. Ianao mandray fisotroan-dronono avy ny mpitondratena sy ny malahelo, dia nilaza taminy fa tsy ampy finoana - satria tsy nahomby. Ianao maka ny volonondry amin'ny ondry. Tsy ianao mitady fanahy, mitady vola. "Ny mpiandry ondry fatten ny tenany, fa tsy ny ondry, noho izany, ianareo mpiandry ondry, mihainoa ny tenin'ny Tompo. Izao no lazain 'ny Tompo Andriamanitrareo, dia jereo fa hasiako ny mpiandry ondry, ary Izaho no hamaly ondry teny an-tànany, ka dia hitsahatra hiandry omby. Tsy tokony fatten ny tenany bebe kokoa, fa Izaho no hanolotra ondry eo amin'ny vavany, ka tsy ho ny nofony. "
Dia hanaisotra ny kisoa andiany ireo olona nify. Andriamanitra anie hanampy antsika.
Faharoa, nanova ny ny fitahiana Fanahy Masina. Izany no fahafaham-baraka ratsy indrindra. Mety hahatonga antsika ho lavo eo amin'ny tarehiny. Ny fomba ny Fanahy Masina dia ho diso amin'izao tontolo izao.
Mampalahelo ny manamarika fa misy fahaiza-manavaka dia kely sisa ao amin'ny fiangonana sy eo amin'ny mpitandrina sy ny fiangonana maro mpitondra. Tsy fantatsika hoe rahoviana na dia ny Fanahy Masina no diso, na niteny ratsy. Misy Kristianina an'arivony, izay any amin'ny fifohazana fampielezan-kevitra ary jereo ny zavatra izay inoany avy amin'ny Fanahy Masina, nefa tsy fantany izay mandray. Dia hiteha-tànana ka nidera an'Andriamanitra, raha misy olona nijoro teo amin'ny lampihazo sy niteny ratsy ary ny nandisoany ny Fanahy Masina, ary tsy mahalala momba izany.
Fiangonana Karismatika manontolo, anisan'izany ny American hetsika Pentekotista, rava ny fifohazana sandoka. Isan-karazany ny zava-mitranga - zava-baovao efa ho isan-kerinandro. Ny mpitondra tsy mahalala na hanaraka na hanozona azy. Tsy fantany izay tokony hatao. Izahay vao mahazo taratasy avy amin'ny mpitandrina an-jatony manerana izao tontolo izao. Mangataka izy ireo. "Inona no atao hoe tsara sy ratsy?" Aiza ireo mpitarika? Aiza ny olona iray izay afaka mitarika antsika?.
Ry namako, ny zavatra hitantsika miseho amin'izao fotoana izao ao ilay antsoina hoe fifohazam-panahy sy ny zava-mitranga ao amin'ny Fanahy Masina, tsy afaka mahita ny fototry ny soratra. Na inona na inona fa tsy afaka mahita ao amin'ny Soratra Masina dia tsy maintsy holavina. Nolavina tanteraka!
Miantso aho rehefa mahita ireo lahatsary ny olona no naniraka ahy amin'ny manerana ny firenena. Fiangonana manontolo avy tany fanaraha-maso, lavo tamin'ny tany, nihomehy tery, mahavariana manodidina toy ny mpimamo, manolana toy ny bibilava, be nampierona, toy ny bibidia. Manana evanjelista izay mitsangana ka mitsoka ny olona ny hahatonga azy ho lavo, toy ny hoe ny Fanahy Masina no Hita ao aminy. Amoahany ny marika palitao amin'ny olona, ​​ary milaza fa "ny tànan'i Jehovah."
Ny filazantsara vaovao vao tonga any Amerika. Ry namako, izany lava volo sy manta, nefa lazaiko aminareo. Rehefa miala ny Teny fikirana, raha hoy ianareo: "Ity no zava-baovao, Andriamanitra dia hanao zava-baovao? Tsy azoko izany, dia tsy an-tsoratra, fa tsy te-manohitra ny Fanahy Masina. "
Ry namako, raha tsy ao amin'ny Baiboly, dia tsy maintsy manohitra izany. Ny farany dia tsy afaka miditra ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy tahaka ny ankizy kely. Ny olona tonga nanao akanjo diapers mba hahafahany manao ny zavatra ilainy mandritra ny fivoriana. Izany no farany. Ry namako, aiza izany no hifarana?
A pasitera nilaza hoe: "Tsy lasa lavitra toy izany, indray andro, evanjelista hitsangana ka manao hoe: Efa nandray ny fanambarana avy amin'ny Tompo, tonga ny fotoana hanombohana nanompo Maria." Ho any amin'ny fotoana izay.
Evanjelista iray hafa miantso ny tenany ny Fanahy Masina bartender. Hoy izy: "Andeha isika ho any amin'ny fisotroana sy hisotro ny Fanahy Masina." Miantso azy ireo ny hisotro amin'ny ranom-boaloboka. I mandre ny tenin'ny mpaminany naneno teo anatrehako, "ny andron'ny Tompo no eto, Mandresy ny ratsy, mitomany eo amin'ny fitsarana sy ny alitara. Tafio ny lasakany ny akanjo. Raikitra ary ny malahelo ho an'ny olona lavo. "
Ho avy i Jesosy. Ny vahoaka mbola unreached. Rehefa mahita ny Kristianina ho any izay hoe ny Fanahy Masina bar, mahavariana toy ny mamo, dia Joel ny tenin'i ahy mazava, "Mifohaza, ianao mamo, ka mitomania, ianareo rehetra izay misotro divay vaovao, satria ny vokatry saha ho levona."
Fanahin'ny an'arivony maty, ka inona no mihomehy? Fa ny Fanahy Masina dia tsy maintsy miasa na aiza na aiza eto an-tany. Tsy maintsy ho afaka ny hitondra azy ho eo amin'ny tena faraidiny sy toerana ratsy. Tsy maintsy ho afaka ny hitondra azy ho any amin'ny tany mahantra. Tsy maintsy ento ho eo amin'ny faikany ny maha-olombelona, ​​ka tsy maintsy miasa ao. Tsy afaka miasa afa-tsy ny manan-karena Amerika. Tsy maintsy miasa na aiza na aiza eto an-tany.
I fanamby ireo olona ireo mba hitondra ny filazantsara any an-mihomehy ankehitriny Balkans. Mandehana any amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana izay nitomany noho ny vehivavy ny lehilahy no voatifitra. Ny zanany vavy no nanolana. Ny zanany dia noana. Izy ireo no namoy ny tranony, dia angataho izy ireo mba handeha any amin'ny bar - Ny Fanahy Masina te azy ireo hihomehy. Io ilay antsoina hoe fifohazam-panahy avy amin'ny Madison Square Garden fahavaratra ity. Raha afaka teny, no mitondra ny enta-mavesatra ny fotoam-pivavahana, ahoana no ho vonona ny handray izany fotopampianarana.
Mamelà ahy hilaza aminareo izay no mihomehy. World. Ny ratsy fanahy ny hafa firenena. Efa lasa ho fizàhan'izao. Tao anatin'ny fotoana tena akaiky ny fiavian 'i Kristy, rehefa ny fiangonan' i Jesoa Kristy dia tokony ho voafandrika ao amin'ny efi-tranonao miafina ny vavaka. Rahoviana no tokony mitomany ny very. Raha izany dia manana faniriana mahafoy rehetra ary hanaraka an'i Jesosy. Rehefa dolara mandrakizay ny volavolan-dalàna dia tokony ho voalaza. Ny American andriamanitra. Ny American avgudadyrkandet. World mijery izany fahaverezan-tsaina sy fantatrao izay mihevitra - fa ny Fanahy Masina dia ringmaster. Izy io dia mpanao fahagagana fampisehoana.
Tsy miraharaha izay olona mieritreritra intsony. Tsy miraharaha ny olona raha tsy te intsony ny gazety. I miahy ny fanahiny sy ny zava-misy fa maro no jamba. Manana adidy eo anatrehan'Andriamanitra mba hitoetra eo anatrehan'ny fiangonana izay efa niantso ahy mba hanompo, ary mananatra anareo, ary milaza fa ireo latsa ho amin'ny fotoam-fiangonana, ary ny Baiboly milaza fa ianao no mitomany azy. Ny anti-panahy no hanome. Ny fiangonana, ny mpitandrina, ny mpanompony, ny Evanjelisitra. Tokony hivavaka teo ireo fiarovana.
Farany, fandatsan'olona hanambany Antenimieram-demoralization. Lozan'izay milaza ny ratsy ho tsara ary na tsara ho ratsy - izay miantso maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina. Izany no mahatonga azy mangidy sy ny mamy mangidy mamy. (Je 23:15). Efa hitako ny zava-mahatahotra teo amin'ny mpaminany. Dia manitsakitsa-bady, dia mandeha araka ny lainga, ny porofo ny ratsy fanahy ary tsy miverina tanana tsy ho azon'ny ratsy.
Nahazo taratasy aho herinandro ity avy amin'ny tezitra vehivavy kristianina. Hoy izy hoe: "Ny lehilahy, izay milaza ny tenany ho Kristianina, dia mpilalao lehibe, dia milalao ho an'ny olona an-tapitrisany." Hoy izy hoe: "Efa mba toy izany miahiahy momba ny loza sy ny antokony izay ananany." Nieritreritra aho hoe: "Izaho mangataka aminy ho any amin'ny pasitora."
Hoy izy hoe: "Rahalahy Wilkerson, tsy fantatrao ny zava-nitranga, dia tezitra aho, naratra sy very hevitra. Dia naniraka ny multi-tapitrisa filokana vadiny ny pasitora. "
Hoy izy hoe: "Efa nitady ny soratra masina ao amin 1 Genesisy ka hatramin'ny Apokalypsy, ary tsy mahita na inona na inona afaka ao amin'ny Soratra Masina izay miteny manohitra ny filokana. Hitako tsy fahotana izany, dia toy izany tokoa fahafinaretana. "Taitra be izy," Inona no Hanampy ny lehilahin'Andriamanitra hoe toy izany ny vadiko? "
Izany no mihitsy no i Jeremia hoe: "pasitera manaporofo mpanao ratsy tanana ary tsy misy miala amin'ny faharatsiany." Manazava izy hoe ratsy ny antony izy ireo Antenimieram demoralization ary nahoana izy ireo milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy sy ny mangidy sy ny mamy mangidy mamy.
Hoy izy hoe: "mpaminany efa nijangajanga izy, ka mandeha araka ny lainga." Na iza na izay manana fahotana teo amin'ny fiainany dia tsy hitsangana, ary mitoria ny ota tao amin'ny toby. Izy no resy lahatra ny ny fanitsakitsaham-bady, ny ota sy ny ratsy saina.
Tsy hanatona misy mpanompo ao amin'ny firenena nandritra ny tohotra. Ny ankamaroan'ny afo ny mpanompo an'Andriamanitra. Misy tanora mpanompo izay voadio teo an taona ratsy ity. Efa nihaona maro tamin'izy ireo, ary Misaotra an'Andriamanitra aho ho azy ireo. Na dia eto amin'ity tanàna ity, efa nihaona ny sasany ny tena marina aho mpitory nivory tao ny fiainako manontolo.
Maro ny mpanompony izay nanaraka ahy hahatsapa ny alahelo ary mitady sy miandry ny feo izay afaka mampiseho izay ratsy. "Raha efa nijoro teo ny kianjako, ary nahazo ny oloko ny teniko - raha toa ka efa noteneniny izay ato am-poko. Raha efa niteny avy any an-tsaina avy amin'Andriamanitra, dia ho niova ny olona miala amin'ny lalan-dratsiny sy ny ratsy ataony. "
Azonao atao ny mijery raha misy olona mahalala ny Tompo Andriamanitra momba ny hafa, "Izaho tsy naniraka azy Aho, Izaho tsy niteny taminy, dia miteny araka ny saina. Ary avy tamin'ny ratsy ao am-pony.
'Izy ireo milaza fahitana avy araka ny fony, dia tsy naniraka azy. Izaho tsy niteny taminy. Hoy izy ireo amin'izay manamavo Ahy hoe: Hoy ny Tompo hoe: Hisy fiadanana ho anareo ', ary hoy izy ireo amin'izay rehetra mandeha araka ny fony sy ny manonofinofy' tsy hisy loza hanjo anareo. ' " Ny fahafaham-baraka ho an'ny fara-fivoriana ho alahelo lehibe indrindra ho an'izay rehetra tia an'i Kristy sy ny Fiangonany. Izany no ho lehibe indrindra ny alahelo ao am-pony - ny fahafaham-baraka ny anarany sy ny fiangonana. Miantso mafy noho ny Antenimieram-panjakana. Rehefa Miandany, ary rehefa mandray ny Tompo ny enta-mavesatra ho anao, amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fifadian-kanina. Zanak'Andriamanitra rehetra mila mivavaka fa izay rehetra tratra amin'izany ny hafahana. Aza tendrenareo izany, no tsy hiditra am izany, raha mankany amin'ny te hahafanta-javatra, dia hamandrika anao fa mahafinaritra izay rehetra avy amin'ny nofo.
Mandra-fantatrao ny fomba hiatrehana ny hena ao amin'ny Fanahy Masina, ka mijanona lavitra azy io. Hoy Jeremia: "Ny Tompo Andriamanitrao no eo aminao mahery. Izy no hamonjy, dia hifaly anao amin'ny fihobiana. Ho sondriana amin'ny fitiavany. Ho faly noho ny aminao amin'ny fihobiana. "
Nahoana? Satria efa nahita olona malahelo noho izay malahelo am-pony. Mitondra ny enta-mavesatra izay mitondra, ny latsa manjo ny tsekoly Township.
Izany no ho ny "fitiavana fandrika". Ianao dia hihaino. "Tianay ny olona rehetra. Tsy maninona izay mitory. Tsy maninona raha mahomby. Tsy maninona izay ny filazantsara dia - na zavatra hafa. Aoka isika hanome samy namihina be. "Ahoana no miara-mandeha roa tsy nanaiky. Ahoana no mandeha izany tsy miombon-kevitra amin'ny, izay tsy araka ny Baiboly fahazarana, ianao tsy afaka. Izy io dia fitiavana fandrika. Hoy izy ireo: "Tsy mitsara na iza na iza aza."
Izany no tsy lazain'ny Baiboly. Izao no voalaza fa Samy hotsarain'Andriamanitra na ny marina fitsarana. Ny fahafaham-baraka, ary niteny mafy tamim-paharetana. Tsy mijoro amin'ny savony lovia, nitsangana teo aho teo ambonin'ny vatolampy. Andriamanitra Miezaka ny hamonjy anao, Ward.
Inona no atao hoe harena an 'i Jesoa Kristy? Ny fiadanana, ny fahendren'Andriamanitra, ny Kristy, izay rehetra ao amin'i Kristy no antsika.
Ry namako, tandremo! Tandremo!
Efa matahotra anao aho? Moa ve ianao vonona ny handray ny entan'i Jehovah. Tsy afaka manao izany amin'ny ny nofo. Miverena ny tenanao amin 'Andriamanitra.
Tonga ny fotoana mba miantsoa fivoriana masina. Raha toa ka misy ireo horonam-peo na boky, manipy azy avy tao an-tranonao. Aza manome azy, handoro azy ireo. Raha misy olona dia manasa anao handray anjara ireo fivoriana, dia ataovy hoe: "Miala tsiny aho, tsy te-ho noana ny teny, nefa tsy tiako ny foko maina sy malazo. Tiako ny teny madio avy amin'ny Tompo izay namela ahy hitombo. Tsy te misy hafatra izay mahafinaritra ny nofoko, na izay miteraka fitiavam-bola tao am-poko. "
Andriamanitra dia manome ny zavatra ilaintsika dia manao fahagagana, fa manao izany amin'ny fombany. Dia tsy avy tamin'ny misappropriating sy misusing Soratra Masina.
Abrahama dia tsy mitady ny ambanin'ny tany, dia nanantena hahazo ny tanàna izay natao ary noforonin'Andriamanitra.
Izany no mpamaky iray mailaka. Author ny hevitry ny efa nahazo ny fa tsy voatery izay mijoro ho Apg29.
Vecka 30, måndag 26 juli 2021 kl. 21:52